Baadhitaanka uurka | Zanzu
Haddii muddadaada dhiiga caadada uu daah yahay, waxaad yeelan kartaa uur. Waxaad samayn kartaa baadhitaanka uurka si aad u ragto haddii aad uur leedahay. Waxaad ka iibsan kartaa baadhitaanka uurka xaga subarmaarkadka, farmasiilaha ama faramasiiga. Tani waa baadhitaanka kaadida. Natiijooyinka saxda ah, waa shayga u fiican in la sameeyo baadhitaanka ka dib muddada dhiigaaga caadada markay daahday ilaa dhowr maalmood.
U samee baadhitaanka qaabka soo socda:
Geli baadhitaanka kaadidaada.
Si gudub ah u dhig baadhitaanka.
Sug ilaa 5 daqiiqo wixii natiijada ah. Waxay ka muuqan doontaa shaashada baadhitaanka.
Haddii baadhitaanku uu wanaagsanyahay, la xidhiidh ummulisada halka aad ku nooshahay.
Gabadh suuli ku fadhida oo ku haysata gacanta dhexda lugahooda. Yoolku waa gacanta u dhexaysa lugaheeda.
Waxaad toos ugu kaaji kartaa caarada baadhitaanka uurka.
Ama waxaad hayn kartaa caarada baadhitaanka uurka weel nadiif ah oo leh qayb kaadidaada ah.
Sug ilaa 5 daqiiqo wixii natiijada ah. Waxay ka muuqan doontaa shaashada baadhitaanka. Uur ayaad leedahay keliya haddii calaamadu ay ka muuqato labbada daaqadood ee badhitaanka.
Haweenka qaarkood waxay leeyihiin astaamaha uurka u horeeya goor hore oo uurka ah.
Qiimaha baadhitaanka uurka
Baadhitaanka uurka aad iibsan karto naftaadu (baadhitaanka uurka) kharashyada udhexeeya € 5 iyo € 15. Waxaa jira summado kala duwan baadhitaanka ah. Waxaad dooran kartaa ka uu yahay nooca baadhitaanka adiga kuu wanaagsan
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Baadhitaanka uurka